Aza miloka amin'ny paikady biolojika | Martech Zone
Niresaka tsara tamin'ny iray amin'ireo mpanjifanay izahay ny faran'ny herinandro izay matetika manamarina sy mangataka valiny momba ilay tranonkala, Analytics, ary fanontaniana hafa momba ny paikady marketing miditra. Tiako ny fisian'izy ireo mifamofo, maro amin'ireo mpanjifantsika no tsy… fa indraindray ny ezaka ilaina amin'ny famaliana sy ny fanazavàna ny antony ataonay dia manaisotra amin'ny asa tena izy.
Ny fanamarihana iray lehibe dia ny vola lanin'izy ireo ihany is ny paikady fitomboana biolojika enjehina amin'ny Internet. Na dia tiako aza ny zava-misy fa isika no mitarika an'io, mampatahotra ahy izany fa ity no tetika tokana anaha-bola. Matetika aho no nilaza tamin'ny olona fa ny fananganana fisian'ny Internet dia toy ny fananganana magazay, trano fisakafoanana na birao. Ny fivarotana dia tokony ho eo afovoany (karoka sy sosialy), tokony hahasarika ireo mpitsidika (famolavolana sy fandefasana hafatra) mety ary tokony hamadika ny prospecta ho mpanjifa (antso ho amin'ny hetsika sy pejy fandraisana).
Fa raha manangana magazay tsara tarehy ianao, dia tadiavo tsara, ary afaka manova ny mpitsidika anao ho mpanjifa… tsy vita ny asa:
Mbola mila mavitrika ianao hampiroborobo ny fivarotanao. Tsy raharahako iza ianao, tena ilaina ny hivoahanao eo ary hanindry ny nofo, hanangana fanarahana, ary hampiditra ny hafa ao amin'ny fiarahamonina. Fivarotana lehibe amin'ny toerana mahafinaritra miaraka amin'ny olona sy vokatra mahafinaritra dia mbola mila fampiroboroboana indraindray. Amin'ny maha-tompona orinasa anao, tsy afaka mipetraka ianao ary miandry ny hahatongavan'ilay orinasa, tsy maintsy mitady azy ianao eo am-piandrasana ny fivoaran'ny tetikady marketing an-tserasera.
Paikady biolojika toa teny vava mety hampitombo ny orinasanao, fa tsy amin'ny hafainganana ilainao azy! WOM dia paikady mahafinaritra ary matetika mamokatra kalitao avo lenta indrindra. Saingy mandany fotoana ireo fitarihana ireo - ka mety tsy maintsy manome tosika fanampiny handroahana fifamoivoizana haingana kokoa ianao. Na mety mila mividy fifamoivoizana fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny karama isan-tsindry, ny sponsorship ary na ny dokam-barotra amin'ny sora-baventy aza. Lafo izany, nefa afaka mitondra fifamoivoizana betsaka kokoa ho anao.
Mitaky fotoana ny fitomboana voajanahary. Ny paikady marketing amin'ny Internet lehibe dia manangana fifandanjana sy fahefana kely isaky ny mandeha. Rehefa mandoa ny faktiora amin'ny varotra ianao, ny fironana miakatra dia tsy fampiononana foana rehefa betsaka ny faktiora miditra noho ny vola miditra… fa tsy maintsy jerenao ny fiakarana sy ny fironana miakatra ary zahana izany mandritra ny herintaona, 2 taona sy 5 taona avy. Orinasa maro no mampiasa vola amin'ny Internet ary manantena fa hanana ny orinasa rehetra ilainy ao anatin'ny 60 ka hatramin'ny 90 andro ho avy. Matetika tsy izany no izy.
Aza miloka amin'ny zava-maniry biolojika ny zava-drehetra. Na… raha manao izany ianao dia aza hadino ny mamela fotoana sy loharano manampy amin'ny fampiroboroboana sy famoahana ny teny amin'ny paikadim-barotra amin'ny Internet. Tsy azonao atao ny manary vola be dia be ao anaty tranokala mahafinaritra sy atiny tsara ary manantena valiny lehibe - misy zavatra hafa tokony hatao. Ny hany faniriako ho an'ity mpanjifa ity dia ny hiezahan'izy ireo hiezaka mafy mba hiasa fa tsy hisarika ny masontsika. Nankinin'izy ireo taminay ny paikadin'izy ireo… ary eo akaikin'ny mpanjifa, tsy misy te hanana fahombiazana mihoatra ny antsika!
Tags: paikady ivelan'ny Internetpaikady marketing amin'ny Internettetika an-tserasera
Apr 25, 2012 amin'ny 9: 55 AM
Ny drafitra ara-barotra dia tokony ho boribory tsara. Zava-dehibe ny paikady fitomboana organika amin'ny Internet, saingy hiasa tsara amin'ny fotoana maharitra rehefa miaraka amin'ny ezaka ara-barotra hafa. Tsy te hametraka ny atodinao rehetra ao anaty harona iray mihitsy ianao satria ny mpanjifa dia afaka mifandray amin'ny marikao amin'ny teboka maro samihafa.